Accueil > Gazetin'ny nosy > INTY SY NDAY: Manantena inona ?
INTY SY NDAY: Manantena inona ?
Taona vaovao indray ity no diavintsika. Efa andro fahatelo isika anio. Samy mifampiarahaba ny tsirairay fa nahatafita an’iny taona 2017 iny. Samy mifampirary soa koa. Dia samy naneho ny fanantenany avy koa.
Zava-dehibe eo anoloan’ny adidy sy andraikitra eo antsoroky ny tsirairay isanandro izany rehetra izany. Ny fanantenana iantefan’ny sain’ny maro dia mba hisy fiovana ho amin’ny tsara ny fiainany. Fiovana inona, hoy izahay ? Raha ny marina dia miandrandra fihatsaram-piainana hatrany ny tsirairay ary manantena hatrany, saingy toa arakaraky ny anantenana no itrangan’ny zavatra mifanohitra amin’izany. Dia sanatria ve tsy tokony hanantena intsony fa hianona sy hiandry ny sitrapon’Andriamanitra sisa no tokony hatao izany ?
Tsara hatrany ny manana fanantenana saingy aoka hotsorina fa tsy ampy fotsiny izany. Tsy ho tonga ho azy eo aminao ny fihatsaram-piainana fa mitaky fandraisanao andraikitra izany.
Ho anay, ohatra, dia voalohan’andraikitry ny tsirairay ny mijery ny antony tsy nahafahany nivoatra sy nahazo fihatsaram-piainana hatrizay. Izahay dia tsy miombon-kevitra amin’ny filazana hoe « kamo sy tsy te hivoatra ny malagasy ».
Tena efa mety nilaozan’ny toetrandro izany raha nisy. Izahay koa anefa dia mahatsapa fa hatramin’izay no tsy nisy izany fahakamoana sy tsy fitiavana hivoatra teo amin’ny malagasy izany. Matoa nijoro nanolotra ny ainy hanavotany ny tanindrazany izay norobain’ny mpanjana-tany ireo Raiamandreny tany aloha tany, dia noho ny faharesen-dahatr’izy ireo fa izay fanolorana ny tena ho an’ny tanindrazana izay no fanoitran’ny fivoarana sy fihatsaram-piainana. Ny andiany taty aoriana aza no tsy nanana loatra intsony an’izay finiavan’ny Raiamandreny tany aloha tany izay.
Ny amin’izao fotoana koa anefa dia hita fa mangetaheta fivoarana sy fihatsaram-piainana ny rehetra. Manantena ny maro fa ho tratra izany. Saingy tsy tratra fotsiny amin’izao, hoy izahay, fa mitaky fanoloran-tena avy amin’ny tsirairay.
Maro ny olana ambaran’ny tsirairay fa vato misakana an’izany, saingy tsy maintsy mamaritra ny olana fototra aloha isika dia mametraka ny ankoatra izay araka ny laharam-pahameana koa.
Misy ny miteny fa ny vola hoenti-mihetsika no olana. Tsy diso izany. Ao ny milaza fa ny mpitondra fanjakana no sakana. Tsy lavina koa izany. Tsy vitsy koa ireo manipika fa ambany ny fahafaha-mividin’ny malagasy ka na misy vokatra miakatra aza, na misy entana vita aza, na misy voka-pikarohana misongadina aza, dia jerem-potsiny toy ny tany nahalavoana ireny satria tsy misy ny enti-manana azy, sy ny sisa e !
Ndeha àry hoy izahay, hongotana sy kapaina fa manimba ny tany ny sakana tsy ahafahan’ity vahoaka malagasy ity mivoatra mba haha-to ny fanantenany e !
Voalohany amin’izany ny rafi-piaraha-monina amin’izao izay manome vahana ny fifanambakana sy fifanararaotana, amin’ny lafiny rehetra. Tokony potehina izany, ary tsy sehatra iray na roa no hahato izany fa ny vahoaka malagasy miara-mientana. Tafiditra ho isan’ny singa ao anatin’izany rafi-piaraha-monina manome vahana ny fifanambakana izany ny fahefam-panjakana, ny olona mitana izany fahefam-panjakana izany, ny fifamatorany amin’ireo mpanani-bohitra vahiny, ny toe-tsaina lomorina amin’ny fiankinan-doha amin’ny any ivelany, ny tsy fananana ilay toe-tsaina tena feno fitiavan-tanindrazana sy tena fahasahiana miaro ny fiandarianam-pirenena.
Olana fototra ireo fa ny ankoatra ireo dia olana manaraka ihany (problèmes secondaires). Ka alao hery àry fa sao holatsain’ny nenina sy ny taranaka eo, rey vahoaka an !